Tyelela uHultsfred | KwiHultsfred kukho indawo yobomi!
🎟️ Ikhalenda yomsitho
🍽️ Yitya kwaye usele
Ukutya okukhawulezayo kunye neepizza
🚜 Iivenkile zasefama
🪑 Izinto zakudala kunye neemarike zentakumba
🏊‍♂️ Iindawo zokuhlambela
🚴‍♀️ Ukukhwela ibhayisekile
Åda intaka ibukele
🪁 Indalo kunye nobomi bangaphandle
⛷️ Ukutyibiliza ekhephini
🛷 uToboggan uyabaleka
🎟️ Izinto ezinomtsalane
🖼️ Ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla
🏡 Iindawo zenkcubeko-zembali
🏘️ Iimyuziyam kunye neMiboniso
🌲 Ulondolozo lwendalo
🏞️ Iipaki kunye nokujonga
Kukho indawo apha ebomini
Fumana iingcebiso ngokuzonwabisa kunye namava
Kungsfiskaren ngexesha loMnyhadala weHultsfred
Fumana iHultsfred kunye neVimmerby nge-22 kaMeyi
Ungaphuthelwa nantoni na eyenzekayo kumasipala waseHultsfred.
Uphendlo lomnyhadala kunye nokuKhangela kweMbono
Ngenisa amagama aphambili. Khangela Iziganeko zamagama aphambili.
Khetha indawo. Khangela iziganeko ngendawo.
UkuJongwa kweMicimbi yokuHamba
2022-05-20	I-20 Meyi, 2022
Meyi 20 ngo-09 ntambama - 17: 00	 phindwayo
NgoLwesihlanu weNtengiso eHultsfred
Iziko leHultfred	UBryggerigatan, uHultsfred
Kwisicwangciso sikaTor embindini weHultsfred, urhwebo lwentengiso luyacwangciswa rhoqo ngoLwesihlanu unyaka wonke. Apha ungathenga itshizi, itshathi, iilekese, iibhutsi nokunye okuninzi. Uluhlu luyahluka
Thumela ifayile ye.ics
Imyuziyam enomdla, imisebenzi enobungane yosapho, izinto ezinomdla kunye nendalo emnandi. Fumanisa yonke iHultfred!
IDjupsjön lichibi elincinci nelinzulu elibekwe kwintshona yeHultsfred. Eli chibi liyinxalenye yeFVO yeStora Hammarsjön. I-SFK Kroken ijonge ngaphezulu kwendawo
I-sauna yaseHammarsjön kunye nebhafu eshushu
I-sauna ye-Hammarsjön kunye nebhafu eshushu ibekwe kwindawo ye-Stora Hammarsjö Ukuba ufuna ukuva into ekhethekileyo, kuya kufuneka uzame i-sauna ye-Hammarsjön kunye nebhafu eshushu. Apha kutshiswa iinkuni kwaye
🏡 Iindawo zenkcubeko-zembali, 🖼️ Ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla
I-Oppbjärken lichibi lehlathi elinzulu elinamanzi achumileyo kunye namanzi acacileyo. Eli chibi libekwe kwiikhilomitha ezimbalwa kwimpuma yeHultsfred, emazantsi elali yase-Fallhult. Malunga
Ukujonga kunye nemisebenzi
Ukumangaliswa kwiindawo zembali, ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla, izilwanyana zasendle, indalo entle nokunye okuninzi. Kukho izinto ezininzi kunye nezinto ezinomdla apha, uninzi lwazo luvuliwe unyaka wonke!
🏨 Ihotele, Iindawo zokutyela
IMarlilla Hotell yihotele encinci enendawo yokutyela. Isidlo sasemini sanamhlanje, la carte, ipitsa kunye nesaladi ziyasetyenzwa apha. Indawo yokutyela inamalungelo apheleleyo. Bangama-40
🖼️ Iimyuziyam kunye nemiboniso, 🎺 Umculo
Ngaphezu kwesiqingatha sesigidi sezinto ezinxulumene nomculo odumileyo waseSweden. Apha uya kufumana ushicilelo, iipowusta, ushicilelo lwevidiyo, iincwadi, izinto ezinomdla - kunye nesinxibo sokuqala sikaKurt Olsson! Swedish Rock Archive
Ipaki kwindawo entle. Kukho ivenkile ye-snus, ivenkile yentengiso, indlu yekofu kunye ne-sauna yelineni kunye nokunye. ILönneberga Hembygdsgille yasekwa ngonyaka we-1941. Bazigcinile bakhathalela ezakudala
E-Hjortenleden uhamba kwiindlela zegrabile ezintle kwiindawo zezolimo kunye needolophana, ezixutywe kunye neendlela ezincinci ehlathini. Wena
Zonke izinto kunye nemisebenzi
Bona zonke iindawo zokuhlambela
Bona zonke iindlela zokunyuka intaba
Bona zonke iipaki kunye neenkampu zendalo
Bona onke amakhaya
Isidlo sangokuhlwa esimnandi ukubhiyozela, isidlo sasemini edolophini okanye ngokuhlwa okumnandi nabahlobo. Kukho into yazo zonke izinto ozithandayo kunye nezihlandlo.
Indawo yokutyela ibekwe eVirserums Konsthall. Apha ungathatha ukhenketho lwegalari yobugcisa kwaye ubuxabise ubugcisa kwaye ukonwabele ikofu elungileyo. Apha
I-Kungen Restaurang ibekwe embindini eHultsfred phakathi kwesicwangciso sikaTor kunye neKöpingsparken. Irestyu yaseKing ibonelela ngee-pizza, iiburger, iintlanzi kunye neetshiphusi kunye nesaladi. Oyingqayizivele yile ndoda
IPizzeria ibekwe embindini waseMarlilla. Ukongeza kwi-pizza, i-kebabs kunye neesaladi zikwimenyu. Zombini uku-odola nokuzisa okanye ukuhlala
Ukuba ufuna ukufumana into ngokukhawuleza, iSibylla yindawo eyaziwayo yokutya okukhawulezayo. USibylla unikezela yonke into evela kwiklasikhi yaseSweden "ephekwe ngesonka" (okt isoseji ephekiweyo
IHotell Dacke yihotele yosapho esembindini eVirserum. Ecaleni kwehotele kukho ipaki enkulu yemoto. Ukusondela kuwo omabini amahlathi kunye nechibi. Indawo yokutyela yehotele
I-Homeslice Pizzeria ibekwe embindini weVirserum ngasekunene kwebhulorho
Ayinamsebenzi ukuba uyayibona imiboniso ngeempelaveki zothando, iholide yosapho okanye inkomfa- kukho iindidi zokuhlala ezifanelekileyo kuzo zonke izihlandlo.
🏕️ Ukukhempisha, AféCafes, IKayak
Apha uhlala unembono entle yeLake Hulingen! Usondele elunxwemeni, izibonelelo kunye nekhefi. Ukuhamba iikhilomitha ezimbini ukuhamba ngohambo lokuhamba kuhamba
Lönneberga inkampu yendalo
Iindawo zokupaka iikharavani, izindlu zemoto kunye nokubanakho ukukhempisha Nanku ukufikelela kwindlu yangasese ekhubazekileyo enamanzi ashushu kunye negumbi lokutshintsha. Indawo ye-Barbecue kunye ne-900 yeemitha ngaphezulu
IMarlilla Hembygdspark indawo yokupaka
IMarlilla Hembygdspark indawo yokupaka. Kwipaki enkulu yemoto eMålilla hembygdspark kukho iindawo zokupaka iikharavani kunye nezindlu zemoto.
IFiskebodarna -Stora Hammarsjöområdet imi malunga neekhilomitha ezili-10 kwintshona yeHultsfred, malunga nemizuzu engama-25 ukuya eVimmerby. Indawo yindawo yolondolozo lwendalo kunye neendawo zokuloba ezibandakanya malunga ne-30
Ngaphandle nje kombindi weMålilla kukho iVilla Karllösa. Indlu yabahambi ibekwe kumbindi wendalo kwindawo yehlathi emangalisayo. Inika amagumbi atofotofo kunye nanamhlanje, asanda kulungiswa
Abafumanisi 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren ngexesha loMnyhadala weHultsfred Fumana iHultsfred kunye neVimmerby nge-22 kaMeyi
Abafumanisi 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren ngexesha loMnyhadala weHultsfred Fumana iHultsfred kunye neVimmerby nge-22 kaMeyi Amadada - amaqhawe ethu egolide!